China kukiya, kutevedzera mhangura kukiya, simbi isina kukiya kukiya, shizha kukiya, anti-humba kukiya, password kukiya, zvigunwe kukiya uye mamwe makiyi fekitori uye vagadziri | Boda
Kune akawanda marudzi uye kudomwa kwepadiki. Kazhinji, saizi yekiyi inoonekwa nehupamhi hwemuviri wekukiya, chinangwa chekiyi chinotariswa nekukwirira kwedanda rekukiya, uye nhevedzano yekiyi inotsanangurwa nematanho ekuvhura padhoo. kuvhura, kuvhura kwakashama, kuvhura kwepamusoro uye kuvhura kaviri. Mashizha edu anowanzoshandiswa anowanzo kuvhurika uye akavhurika akavhurika.
Ndokunge, kana kiyi ikaiswa mukiyi slot yeiyi silinda, iyo kiyi inogona kudhonzwa mudenga isina kutenderera, iyo inonzi "kumusoro kuvhura". Mhando iyi yeshinda inokodzera zvakanyanya kubata vacheche kana kutakura vanhu vakavhurika vasina kukodzera kuisa pasi zvinyorwa. Izvo zvinonzi "zvakapetwa kaviri" zvinoreva kiyi inogona kuvhurwa chete kana makiyi maviri achishanda. Iyo ine yakasimba kuchengetedzwa kwekuita uye inokodzera nguva apo vanhu vaviri vanodikanwa kuti vachengete iro rinokiya uye vanhu vaviri varipo kuvhura iyo kiyi panguva imwechete, senge imba yekuchengetera uye bhangi.
Pamusoro pekupatsanurwa kweshinda zvinoenderana neyakavhurika nzira (kuvhura yakananga, kuvhurika kwakatwasuka, kuvhura kwepamusoro, kuvhura kaviri), tinogona zvakare kuvaronga zvinoenderana nemukati mechimiro chemakiyo. Mhando dzakajairika ndedzinotevera: marble mamiriro evharo
Izwi rimwe kiyi kukiya
Rudzi rweiyi kiyi inoshandisa cylindrical chitubu kumisikidza zvipingamupinyi mukiyi cylinder, kuitira kuti iyo cylinder isakwanise kutenderera uye kuita basa rekukiya. Chimiro cheBullet zvakare chimwe chezvivakwa zvinowanzo shandiswa zvevhudzi. Iyo yekuvharira yemhando yemhando yekiyi yakaputirwa nezvidimbu zvesimbi, izvo zvinopa vanhu kunzwa kwekukora uye kusimba. Inodaidzwa kuti "chihwande churu chekiyi". Nekudaro, chimiro chayo chemukati zvakare chiri bhiridha chimiro, saka ndezvechikamu chebullet chimiro padlock. Rudzi urwu rwekiyi runoshandisa jira simbi ine maumbirwo akasiyana-siyana kuvhara uye kukiya. Rudzi urwu rwechimiro runowanzo shandiswa mu zinc alloy kana yayo alloy kukiya.
Magnetic mamiriro padiki:
Zvinoenderana nesisitimu yemagineti repulsion, iyo magnetic Lock cylinder system inogamuchirwa. Iyo inogara iri yemagineti yesimbi kupatsanura bhodhi ine yakafanana magineti ndiro seiyi kiyi yakaiswa pakati pekiyi core groove nepini yekuchengetedza Iyo kiyi haibatanidze zvakananga nepini yekuchengetedza. Kana iyo isina slot magineti kiyi yakanyatso kuisirwa mukiyi silinda slot, iyo kiyi inobata simbi yekuparadzanisa ndiro uye inogadzira yakasimba simba repulsion simba, iyo inoita kuti iro rakavhurika rivhure nyore. Uye zvakare, iyo pfungwa yekukwezva kwemagineti inoshandiswa zvakare kudhirowa ndiro yesimbi zvine simba uye kuvhura iyo kukiya nechirimo.
Padlocks ndeaya: Stainless simbi padiki, yemhangura padiki, Du-yakafukidzwa simbi inokiya, pfumbu simbi kukiya, kutevedzera mhangura kukiya, zinc chiwanikwa kukiya, forogo kukiya, cheni kukiya
1. Simbi isina kukiya inovhara. Nekudaro, nekuda kwekuoma kwekugadzirisa uye kudhura, haiwanzoshandiswa muChina.
2.Copper padlock: chinhu chakakosha chekiyi imhangura, uye inowanzo shandiswa idiki yemhangura padiki, iri pasi pe40mm muhukuru, kunyanya nekuti mutengo wemhangura wakanyanya kukwirira.
3. Iron Padlocks: zvakajairika.
B. Grey simbi yekuvharira: iyo yepamusoro inorapwa negrey pendi, uyezve mazhinji mavara ane mavara anoonekwa, ese ayo ari echikamu ichi.
C. Kutevedzera kukiya yemhangura: ndeyesimbi yakakiyiwa yesimbi, iyo inoreva kuputira mhangura pamusoro
4. Zingi alloy padlock: iyi mhando yeshinda inoumbwa neakafa muchina wekukanda nemhando yepamusoro.
3, By chimiro
1. Foloko yekiyi
2. Cheni yakakiya
3. U-mhando kukiya
BOSENDA inopa akasiyana siyana evharo, edu akavharirwa anotumirwa kuSouth East Asia nyika, kuSouth America, kuEurope, East EU nyika uye Middle East. Kuti uwane rumwe ruzivo, inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Pashure: PVC inonaya prrof jira, Pe mvura inonongedza jira, chifukidzo cherori
Zvadaro: Cheni, yekusimudza cheni, kwakakurudzira cheni, isina simbi cheni, kwakasiyana kurondedzerwa
Fingerprint Kodhi Kiyi
Stainless Simbi Lock